▷ SSD kacha mma maka laptọọpụ, kedu ka ị ga-esi mara nke ị ga-azụ?
Mbata nke draịva siri ike steeti Ha ekwela ka ngwa ndị a na-ebugharị ebugharị nweta agagharị ma belata akụkụ nke ikpe ahụ. Na mgbakwunye, ha ewetala ọsọ nnweta dị elu karịa HDD ọdịnala. Site na ha ị ga-enweta mmalite ngwa ngwa ma ị ga-ahụ mmụba dị ịrịba ama na ibu nke mmemme na faịlụ. Ọ bụrụ na ịchọrọ otu n'ime SSD ndị a maka laptọọpụ gị, nke mbụ, ị ga-eburu n'uche usoro nlebara anya ...
1 Kedu ihe bụ SSD diski
1.1 3 ”SATA2.5 SSD
1.2 PCIe dabere M.2
2 Kedu ka m ga-esi mara ma enwere m ike ịwụnye SSD na laptọọpụ m?
3 Otu esi amata laptọọpụ SSD ka ịzụrụ
4 Otu esi ama njirimara nke draịvụ ike m ugbu a
4.1 Otu esi mara interface nke draịvụ ike m ugbu a na-eji
4.2 Otu esi amata ụdị draịvụ ike m ugbu a bụ:
4.3 Otu esi amata ikike draịvụ ike m dị ugbu a
4.4 Otu esi amata ime na ihe nlereanya nke draịvụ ike m ugbu a:
5 Uru nke SSD na HDD
6 Ọ dị mfe ịwụnye SSD na laptọọpụ?
7 Ọ bara uru itinye SSD na laptọọpụ nwere HDD?
Kedu ihe bụ SSD diski
Un SSD (State Draịvụ siri ike) Ọ bụ ngalaba nchekwa nke bịara iji dochie ma melite ụfọdụ njirimara HDD ndị a na-ahụkarị. Nkeji ọhụrụ a enweghị akụkụ igwe, yabụ a na-enweta ntụkwasị obi. Na mgbakwunye, ha anaghị arụ ọrụ na isi ndekọ na platter magnetik, kama na-echekwa ozi ahụ na ibe ebe nchekwa na-adịghị agbanwe agbanwe, dị ka flash.
N'ime SSD ị ga-ahụ mkpọda abụọ na i kwesiri ima:
3 ”SATA2.5 SSD
Kingston A400 SSD diski ...
SanDisk SDSSDA-240G gbakwunyere ...
Mkpa MX500 1TB ...
Ndị a bụ ndị a na-ahụkarị na mbụ, nwere akụkụ nke sentimita abụọ na ọkara, ọ bụ ezie na nke nta nke nta ejirila ihe ndị dị ntakịrị chụpụ ha. Ụdị draịvụ ike siri ike dị ka M.2 n'ụzọ ọ na-echekwa ozi, mana ha dabere na bọs SATA3, yabụ ị ga-ejedebe site na bandwidth ha. SATA3 nwere oke na 750 MB / s nke ezigbo ọsọ (ma ọ bụ 6 Gb / s), yabụ, n'agbanyeghị ohere ha dị, bandwidth ahụ ga-agbaji ha.
PCIe dabere M.2
Mkpa P2 CT1000P2SSD8 ...
Hefddehy 2 unidades de...
A na-egosi ndị a na kaadị M.2, nke nwere akụkụ dị ntakịrị, na obosara nke na-adị 22 mm mgbe niile na ogologo 5 nwere ike ịhazi (30, 42, 60, 80 na 110 mm). Mana njirimara kachasị mkpa abụghị na obere nha ya, mana na ọsọ nke ọ nwere ike ịga. Dịka ụgbọ ala PCI Express na-akwado ha, ha nwere ike ịgafe oke SATA3. Dịka ọmụmaatụ, PCIe 4.0 nwere ike iru ọsọ mbufe nke 16 GB / s, ma ọ bụ ihe bụ otu, 15,8 Gb / s kwa uzo, ya bụ, 1,969 MB / s. Ebe ọ bụ na ọ na-enwekarị njikọ x2 ma ọ bụ x4, oke ọsọ ha na-enweta ga-abụ okpukpu abụọ ma ọ bụ okpukpu anọ, nke na-adọrọ mmasị. Na nke ahụ agbakwunyere na nkwụsịtụ na ịnweta ọsọ dịkwa ịtụnanya ...
Ọ bụ ezie na e nwere ihe ndị ọzọ udi na ụdịAbụọ ndị a bụ ndị a na-ahụkarị na nke ị ga-ahụ na PC ụlọ mgbe niile.
Kedu ka m ga-esi mara ma enwere m ike ịwụnye SSD na laptọọpụ m?
N'okwu a, ọ bụrụ na ịchọrọ tinye SSD Na laptọọpụ gị ihe mbụ bụ ijide n'aka na ị nwere ike ịwụnye ụdị mgbasa ozi nchekwa a. Iji jide n'aka, lelee:
Ọ bụrụ na laptọọpụ gị nwere a HDD dị ka draịvụ ike mbụMgbe ahụ ọ ga-enwe SATA3 interface. N'okwu ahụ, ị ​​ga-eji SATA3 SSD dochie HDD ka ọ dakọtara. Ndị a ike draịva adịghị nwere ọtụtụ uru dị ka ndị M.2, n'agbanyeghị na ha ga-eche na a ukwuu ima elu na okwu nke ọsọ.
Ọ bụrụ na laptọọpụ gị nwere a Isi SSD arụnyerelarị, mgbe ahụ, ị ​​​​ga-achọpụta ma ọ bụ SATA3 ma ọ bụ na ọ bụ M.2. N'okwu a, ị nwere ike iji nke yiri nke ahụ dochie SSD mbụ gị, n'agbanyeghị na ọ nwere ike ịbụ nke ka ukwuu.
Ọ bụrụ na laptọọpụ gị nwere a M.2 SSD dị ka isi na SATA3 HDD dị ka mbanye nke abụọ Maka data, ịnwere ike iji usoro ọzọ dochie SSD nke mbụ, ma ọ bụ kwalite ọsọ nke nke abụọ site na iji SATA3 SSD dochie SATA3 HDD.
Ọ bụrụ na laptọọpụ gị nwere otutu oghere M.2, mgbe ahụ ị nwere ike ịwụnye SSD nke abụọ nke usoro ahụ maka data.
Si ị maghị ihe ị nwere ma ọ bụ na ị maghị nke ọma, gụọ akụkụ na-esote ...
Otu esi amata laptọọpụ SSD ka ịzụrụ
Ka ịhọrọ SSD ọhụrụ nke ị nwere ike ịwụnye n'ọnọdụ gị, ị kwesịrị iburu n'uche ihe ndị a nkọwa ma mara ka ị ga-esi lelee ndị na-emetụta laptọọpụ gị:
Atụmatụ na-emetụta ndakọrịta:
Nkwupụta: Ọ bụrụ na ị na-aga dochie otu ike mbanye na ọzọ, ma primary ma ọ bụ nke abụọ, ọ ga-mgbe ọ ga-adaba otu interface dị ka nke gara aga nke ị ga-dakọtara. Ya bụ, ọ bụrụ na ị nwere SATA3 ị ga-ahọrọ SATA3, n'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na ọ bụ M.2 ọ ga-abụ M.2. Enwere M.2 ka ndị ntụgharị SATA3, ma anaghị m akwado ya, n'ihi na ọ ga-abụ ihe mgbakwunye ego ma ga-anọgide na-ejedebe na SATA3.
Mpempe usoro: Ọ bụrụ na draịvụ ike mbụ gị bụ SATA3, mgbe ahụ ọ ga-enwerịrị akụkụ nke 2.5 ″, yabụ ị ga-eji akụkụ ndị ahụ zụta SSD. N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na ọ bụ M.2 SSD, ị ga-ahọrọ otu n'ime kaadị ndị a. Na nkenke, mgbe niile otu ka ọ dakọtara.
Atụmatụ na-adịghị emetụta ndakọrịta:
Ike- Ike anaghị emetụta ndakọrịta, enwere ike ịnwe oke n'ihi sistemụ arụmọrụ / faịlụ, mana n'ozuzu ma ọ bụrụ na ị nwere sistemụ dị ugbu a ekwesịghị ịbụ. Ya bụ, ọ bụrụ na ị nwere 120 GB SSD ma ọ bụ HDD, ịnwere ike iji ikike ọzọ dochie ya, ma ọ dị obere ma ọ bụ buru ibu.
Dị na ihe nlereanya: mere na ihe nlereanya adịghị emetụta ma. Nke a pụtara na ọ bụrụ na draịvụ ike gị bụ Seagate, ịgaghị ahọrọ Seagate maka nke ọhụrụ, ọ nwere ike ịbụ Western Digital, Samsung, ma ọ bụ ihe ọ bụla ịchọrọ. Ọ bụrụhaala na ọ na-asọpụrụ ụdị ụdị na interface, ọ ga-adaba adaba.
Hụ onyinye na ụdị ndị ọzọ na SSD maka laptọọpụ
Otu esi ama njirimara nke draịvụ ike m ugbu a
Ugbu a, ozugbo anyị maara ihe mmetụta na ihe na-adịghị emetụta ndakọrịta, ndị na-esonụ bụ ịmata ka ị ga-esi mara ndị àgwà nke gị ugbu a ike mbanye na-eduzi gị na ịzụrụ nke ọhụrụ unit:
Otu esi mara interface nke draịvụ ike m ugbu a na-eji
Na windo: ị nwere ike mepee ngwa Ozi Sistemụ> Ngwa> Nchekwa> Diski. Ị nwekwara ike ịga na Njikwa Ngwaọrụ> draịva diski, wee hụ ma ọ bụ ATA / SATA, wdg.
Na GNU / LinuxỊ nwere ike iji ụzọ dị iche iche, dịka ọmụmaatụ site na iwu ndị a na-eme n'enweghị nkwuputa "sudo hdparm -I /dev/sda" (na nke a, ị ga-eji aha unit nke ịchọrọ iji dochie / dev / sda), ma ọ bụ "lshw -class disk -class nchekwa", wdg. Ụzọ ọzọ bụ iji ngwa eserese dị ka GNOME Disk (gnome-disks).
Na macOS: gaa na ngwa Disk Utility> Lelee> Gosi ngwaọrụ niile> Họrọ ihe dị na sidebar ịchọrọ inweta ozi gbasara> Pịa bọtịnụ ozi (i) na ogwe ngwaọrụ.
.Zọ ndị ọzọ: ụzọ ndị ọzọ na-aga site na ngwa ndị ọzọ, dị ka AIDA64, Hardinfo, CristalDiskInfo, wdg, nke na-enye ozi ngwaike zuru ezu. Ị nwekwara ike ịhọrọ ile anya na akwụkwọ ntuziaka maka ụdị laptọọpụ gị ma ọ bụ na nkọwa teknụzụ. Ọ bụrụ na ịnweghị ike ijikwa usoro ọ bụla dị n'elu, ụzọ ọzọ bụ imepe laptọọpụ gị wee lelee ya n'onwe gị.
Otu esi amata usoro bụ draịvụ ike m ugbu a:
Na windo: ị nwere ike mepee ngwa Ozi Sistemụ> Ngwa> Nchekwa> Diski. Ị nwekwara ike ịga na Njikwa Ngwaọrụ> draịva diski, wee hụ ma ọ bụ ATA ọ ga-abụ 2.5 ", ma ọ bụ ọ bụrụ na ọ bụ PCIe / M.2.
.Zọ ndị ọzọ: ụzọ ndị ọzọ na-aga site na ngwa ndị ọzọ, dị ka AIDA64, Hardinfo, CristalDiskInfo, wdg, nke na-enye ozi ngwaike zuru ezu. Ị nwekwara ike ịhọrọ ile anya na akwụkwọ ntuziaka maka ụdị laptọọpụ gị ma ọ bụ na nkọwa teknụzụ. Ọ bụrụ na ịnweghị ike iji nke ọ bụla n'ime ụzọ ndị a dị n'elu, ụzọ ọzọ bụ imepe laptọọpụ gị wee lelee ma ọ bụ obere kaadị eletrọnịkị (M.2) ma ọ bụ na ọ bụ 2.5 ”unit.
Otu esi amata ikike draịvụ ike m dị ugbu a
Na windo: ihe kachasị mfe bụ ịga na nhazi> Sistemu> wee lelee ike nke C: mbanye, nke ga-abụ diski ike mbụ. Ị ga-enwekwa ike ịhụ ikike ma ọ bụrụ na enwere ihe karịrị otu mbanye, dị ka D :, wdg.
.Zọ ndị ọzọ: ụzọ ndị ọzọ na-aga site na ngwa ndị ọzọ, dị ka AIDA64, Hardinfo, CristalDiskInfo, wdg, nke na-enye ozi ngwaike zuru ezu. Ị nwekwara ike ịhọrọ ile anya na akwụkwọ ntuziaka maka ụdị laptọọpụ gị ma ọ bụ na nkọwa teknụzụ. Ọ bụrụ na ịnweghị ike iji nke ọ bụla n'ime ụzọ ndị a dị n'elu, ụzọ ọzọ bụ imepe laptọọpụ gị wee lelee akara diski ike ebe akọwara ike ya.
Otu esi amata ime na ihe nlereanya nke draịvụ ike m ugbu a:
Na windo: ị nwere ike mepee ngwa Ozi Sistemụ> Ngwa> Nchekwa> Diski. Ị nwekwara ike ịga na Njikwa Ngwaọrụ> draịva diski, ebe ahụ ị ga-ahụ ihe mere na ihe nlereanya nke diski diski / s ị nwere.
.Zọ ndị ọzọ: ụzọ ndị ọzọ na-aga site na ngwa ndị ọzọ, dị ka AIDA64, Hardinfo, CristalDiskInfo, wdg, nke na-enye ozi ngwaike zuru ezu. Ị nwekwara ike ịhọrọ ile anya na akwụkwọ ntuziaka maka ụdị laptọọpụ gị ma ọ bụ na nkọwa teknụzụ. Ọ bụrụ na ịnweghị ike iji ụzọ ọ bụla gara aga, ụzọ ọzọ bụ imepe laptọọpụ gị wee lelee akara ebe akara na ụdị pụtara.
Ugbu a, site na ozi ị nwetara, ị ga-enwe ike ikpebi kedu draịvụ ike ị nwere ike ịzụta dakọtara...
Uru nke SSD na HDD
Uru nke nkeji SSD ndị a na-adabere na ya ohere ọsọ (gụọ ma dee), ebe ọ bụ na ha dị elu karịa nke HDD. Uru ya bụ na ịnweta data ị nwere ike iji akara eletrik rụọ ọrụ, dịka otu esi eme ya na RAM. N'aka nke ọzọ, na HDD ọ dị mkpa ịkwaga isi na ebe a na-agụ akwụkwọ ebe anwụ dị na ịgụ ya adịghị ngwa ngwa.
Iji nweta echiche, a NVMe PCIe SSD ọ nwere ike ime ohere ịgụ ihe dị ka 110.000 ns (0.11 ms) ebe draịva HDD ga-eme ya n'ihe dịka 5-8 ms. Ma ọ bụrụ na nke ahụ dị ntakịrị n'anya gị, ọnụ ọgụgụ ndị ọzọ nke HDD vs SSD ga-eju gị anya:
Otu SSD nwere ike iru ọrụ 6000 I/O kwa sekọnd, ma e jiri ya tụnyere 400 maka HDDs. Nke a pụtara na SSD na-agba ọsọ ugboro x15.
Ọnụego ọdịda nke SSD, n'agbanyeghị inwe akwụkwọ akụkọ ọjọọ na mbụ, bụ naanị 0.5% ma ọ bụ obere, ebe ọdịda HDD bụ 2-5%, nke ahụ pụtara ihe ruru ugboro 10 obere ọdịda na SSD.
Ka SSD na-eri n'etiti 2-5W, HDD na-eri 6-16W. Nke a pụtara na ị ga-echekwa ike na SSD ma ọ ga-emepụta obere okpomọkụ.
Ndabere na SSD nwere ike were ihe ruru awa 6, dabere na ike. Na HDD ọ nwere ike were ihe ruru awa 24. Nke ahụ pụtara na nkwado ndabere na mpaghara dị ihe ruru ugboro ise ngwa ngwa na SSD.
Ọzọ n'ime nnukwu uru na-abụkarị akụkụ ahụ nke nwere SSD na HDD. Iji dobe efere dị iche iche, oghere dị n'etiti ha, ndị isi, moto, wdg, HDD nwere olu dị elu. N'ụzọ dị iche, SSD bụ naanị PCB nwere ibe ole na ole.
Ọ dị mfe ịwụnye SSD na laptọọpụ?
Ee, ọ dị nnọọ mfe. Ihe kacha agwụ ike ga-abụ imeghe laptọọpụ maka nrụnye. Ma ozugbo ị banyela ebe etinyere draịvụ ike, usoro nrụnye dị oke mfe. Usoro niile akọwapụtara bụ:
Ihe mbụ bụ iwepu batrị ma kwụpụ ihe nkwụnye ọkụ na ọkụ ka ịzenarị ihe omume.
Mepee laptọọpụ gị wee banye ebe a na-edebe draịvụ ike. N'ozuzu, ọ dị mfe ịchọta ha, mana ọ bụrụ na ị furu efu, ị nwere ike ịkpọtụrụ ụfọdụ ntuziaka teknụzụ dị maka ụdị gị kpọmkwem na webụsaịtị onye nrụpụta laptọọpụ gị.
Wepu ngalaba ochie (ọ bụrụ na enweghị njikọ efu):
Ọ bụrụ na ọ bụ HDD, a ga-eji ihe agha igwe na ịghasa kpuchie ya. Naanị ị ga-ewepụ ihe nkedo ahụ iji tọpụ ya ma bugharịa diski ahụ ka ọ kwụsịrị na SATA na njikọ ike.
N'ihe banyere ịbụ M.2, mgbe ahụ, ị ​​​​ga-ewepụ ihe nkedo nke na-eme ka ọ dị n'ọnọdụ kwụ ọtọ ma ị ga-enwe ike ibuli ya ntakịrị iji wepụ ya na oghere.
Ihe na-esonụ bụ itinye draịvụ ike SSD ọhụrụ:
Ọ bụrụ na ịbụ SATA, naanị ị ga-etinye SSD ọhụrụ n'ime ngwa agha, jikọọ na ọdụ ụgbọ mmiri SATA / ike wee laghachi azụ.
Ọ bụrụ na ọ bụ M.2, wee pịa kaadị dị na oghere. Ị ga-ahụ na ọ nwere grimace, ya mere enwere ike itinye ya naanị otu ụzọ. Ozugbo a pịara ya, tinye ya n'ahịrị ma mee ka ịghasa sie ike.
Maka oghere ma ọ bụ oghere efu, ọ ga-abụ naanị ịwụnye SSD ọhụrụ na-eso otu usoro ahụ dị n'elu.
Ugbu a, ọ ga-abụ okwu imechi akụrụngwa ọzọ, na-echefughị ​​ijikọ components ma ọ bụ eriri ndị ị ga-ewepụ mgbe ị meghere laptọọpụ gị. Ma ozugbo emechiri, ị ga-enwe ike buut wee malite na nhazi nke ngalaba ọhụrụ iji nye ya usoro wee malite iji ya ma ọ bụrụ na ọ bụ nke abụọ, ma ọ bụ tinye sistemụ arụmọrụ n'ime ya ma ọ bụrụ na ọ bụ nke mbụ. otu...
Ọ bara uru itinye SSD na laptọọpụ nwere HDD?
MX500 500GB dị mkpa ...
BX500 480GB dị mkpa ...
Na nkenke, draịva SSD ọhụrụ na-enye ụfọdụ nnukwu uru n'ihu HDD ma dị mfe ịwụnye. Ị ga-emeri na ịgbachi nkịtị, ebe ọ bụ na ha anaghị eme mkpọtụ, na nkwụsị okpomọkụ, na ụgwọ ọkụ eletrik na, karịsịa, na mmalite na ibu ngwa ngwa.
SSD nwere naanị Fọdụ ọghọm na ị ga-atụle ma hà bara uru ma ọ bụ na ọ bụghị n'ọnọdụ gị:
Ọnụ ahịa dị elu. Ka ha na-adịwanye elu na nkeji ọhụrụ, ọnụahịa ha dị elu karịa HDD n'otu ikike.
Ike bụ isi ihe ọzọ ị ga-atụle, ebe SSDs na-ada azụ HDDs. Ọ bụ ezie na enweelarị HDD nwere ikike nke 16 TB ma ọ bụ karịa, SSD ka na-aga maka ikike nke ihe dịka 8 TB ma na-aga n'ihu ...
Ụfọdụ nkeji na-adabere na NAND flash cell, ha na-enwekarị okirikiri ide ihe, ma n'oge ahụ, ha nwere ike ịkwụsị ịrụ ọrụ, n'agbanyeghị na nke a nwere ike ịbụ mgbe ọtụtụ afọ ejirila ... HDD n'echiche ahụ na-adịte aka ma ọ bụrụ na ọ dịghị nke ọ bụla n'ime ha na-adịte aka. akụkụ ya n'ibu, n'ihi na o yikarịrị ka ọ ga-ada. Agbanyeghị, ụfọdụ sel DRAM ọgbara ọhụrụ na SSD enweghị oke ndị a yana ndụ ha dị ogologo, n'agbanyeghị na ọnụahịa ha dịkwa elu.
Laptọọpụ dị ọnụ ala » Nduzi » Laptọọpụ SSD